कम खान, बढी पिउन ओलीको निर्देशन !
नेपाली बोलीचालीमा ठोस पदार्थलाई खानेकुरा भनिन्छ भने तरल पदार्थलाई पेयको रुपमा बुझिन्छ । ‘टुक्के–उखाने’ को पदवी पाएका एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीले फेरि एउटा गज्जवको कुरा गरेछन् । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई कम खान निर्देशन दिएछन् । ठोस कुरा धेरै खायो भने पचाउन गा¥हो पर्ला, चुनावको बेलामा छेरपाटी लाग्यो भने सडकतिर कार्यकर्ताले फोहोर गर्लान् भनेर ओली कामरेडले त्यसो भनेका हुन् भने त्यसलाई स्वाभाविक र स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्ला ।
तर साङ्केतिक रुपमा ओलीले ठोस पदार्थ धेरै नखानू, तरल पदार्थ चाहिं सक्दो पिउनू भनेका हुन् भने कुरा बडो गम्भीर जो छ । ओलीले कार्यकर्तालाई गर्मी छ धेरै पानी पिउनू भनेका हुन् भने पनि ठीकै भनेछन् भन्ने हुन्थ्यो । त्यत्रो पार्टीका अध्यक्षले आफ्ना प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई पानी पिउन भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था पक्कै होइन होला । एक मनले ठाड्कानेले यसो विचार ग¥यो । हैन एमाले पार्टी पनि गज्जवको रै’छ । यस्तो अनुशासित पार्टी नेपालमा अरु छन् कि छैनन् हँ ? खान–पिउन पनि अध्यक्षको आदेश पालना गर्ने !
एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव जित्न कम खानु, कम सुत्नु भनेछन् । तर पिउने कुराको बारेमा केही बोलेनछन् । नेपाली जनजीवनमा मौनम् सम्मति लक्षणम् भन्ने उखान बडो प्रचलित छ । उनले खाने र सुत्ने कुरा गरेर पिउने कुरालाई चाहिं छुट दिएका हुन् कि ? चुनाव जो लाग्या छ। त्यसमा पनि अझ जित्नु छ । कि धेरै पिएर अरुलाई चाहिं बगाइदिनु भन्न खोज्या त होइन ।
यसो सोच्दै गर्दा ठाड्कानेको दिमागका विगतका केही घटनाहरु फन्फनी घुमे । त्यो क्रममा एकजना चरी नामका मान्छे मारिएको रिल घुम्यो । चरिले गरेका गुण्डागर्दीले सीमा नाघेपछि समात्न खोज्दा प्रहरी कार्वाहीमा मारिएका थिए । अर्को के पर्शुराम भन्ने डनको नाम पनि एमाले र ओलीसँग जोडिएर आएका थिए । त्यसो त अहिले पनि धेरै नाम कहलाएका डनहरु ओली र एमालेसँग जोडिएका छन् भन्ने यदाकदा सुन्न पाइन्छ । सामान्य खानपिनको विषय त अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा मात्रै हुने रहेछ भने त्यत्रा ‘डन’ हरु त झन् ओलीको आदेशबेगर किन चल्दा हुन्– कसैले काउकुती लगाएको ६ महिनापछि मात्र महसुस गर्ने ठाड्कानेले बल्ल कुरा बुझ्न आँट्या छ ।